Rakhiis kulul oo hawo kulul oo loogu talagalay Shirkadaha & NPK Isku-darka Bacriminta Qashin-qallajiyeyaasha Qalalan iyo Warshadda | YiZheng
Gaas-saliid Foornada hawo kulul had iyo jeer la shaqeynayo mashiinka qalajiyaha ee khadka wax soo saarka bacriminta.
Waa maxay Jikada kulul?
Ku Foornada hawo kulul wuxuu u isticmaalaa shidaalka inuu si toos ah u gubto, wuxuu sameeyaa qarax kulul iyada oo loo marayo daaweynta isdaahirinta sare, wuxuuna si toos ah ula xiriiraa maaddada kululaynta iyo qalajinta ama dubista. Waxay noqotay badeecad beddel ah oo laga helo isha kuleylka korantada iyo isha kuleylka tamarta dhaqameed ee warshado badan.
Maxaa loo adeegsadaa Mashiinka Kulul-kululeeyaha?
Isticmaalka shidaalka Foornada hawo kulul waa qiyaastii kala bar isticmaalka kuleylka ama kululeeyayaasha kale ee aan tooska ahayn. Sidaa darteed, hawada kulul ee nadiifinta tooska ah ayaa loo isticmaali karaa iyada oo aan saameyn ku yeelan tayada alaabada la qalajiyey.
Shidaalka waxaa loo qaybin karaa:
1 Shidaalka adag, sida dhuxusha iyo Coke.
Fuel Shidaalka dareeraha ah, sida naaftada, saliida culus, shidaalka ku saleysan aalkolada
Fuel Shidaalka gaaska, sida gaaska dhuxusha, gaaska dabiiciga ah, iyo gaaska dareeraha ah.
Hawada kulul ee ay soo saarto falcelinta gubashada shidaalka waxay la xiriirtaa hawada banaanka waxayna ku qastaa heerkul gaar ah, ka dibna waxay si toos ah ugu timaaddaa mashiinka qalajinta, sidaas darteed hawo kulul oo isku dhafan ayaa xiriir buuxa la leh granules bacriminta si ay u qaaddo qoyaanka. Si looga faa'iideysto kuleylka falcelinta gubashada, xirmo dhan oo ah qalabka gubidda shidaalka waa in si wadajir ah loo wada shaqeeyaa, sida: Dhuxulada, Saliidaha gubta, Gaaska gubi, iwm
Mabda'a Shaqada ee Foornada Hawo-kulul
Nidaamka qallajinta iyo habka qoynta qoyan, kuleylka hawo kulul ayaa ah qalab lagama maarmaan u ah, kaas oo bixiya isha kuleylka lagama maarmaanka u ah nidaamka qalajinta. Taxanaha gaaska / saliida kuleylka kulul wuxuu leeyahay astaamaha heerkulka sare, cadaadiska hooseeya, xakameynta heerkulka saxda ah iyo isticmaalka sare ee tamarta kuleylka. Kuleyliyaha-kululeeyaha waxaa lagu dhejiyay dabada kuleylka kulul ee kulul si loo hagaajiyo waxtarka Foornada hawo kulul. Dusha sare ee kululaynta qalabka ayaa korsada qiime macquul ah oo sareeya iyadoo lagu saleynayo xisaab adag si loo hubiyo wareejinta kuleylka buuxa ee jirka foornada iyo waxtarka kuleylka sare eeFoornada hawo kulul.
Astaamaha kuleylka kulul-hawada
Tijaabada ah Foornada hawo kulul by soo saaraha bacriminta isku dhafka ahi waxay cadeyneysaa in aaga kuleyliyaha uu weyn yahay oo mugga qaraxa kulul uu kufilan yahay, taas oo si weyn u yareynaysa kala duwanaanshaha heerkulka u dhexeeya madaxa iyo dabada mashiinka qalajinta silsiladda hal wareega ah, si qoyaanka bacriminta xarunta si fudud loogu xakameeyo inta u dhexeysa. Xaqiiqdu waxay caddeysay in adeegsigaFoornada hawo kulul ma xakamayn karo oo kaliya qoyaanka granules ka dib qalajinta, laakiin sidoo kale xallin kara dhibaatada weyn ee agglomeration bacriminta, isla mar ahaantaana la yareeyo isticmaalka wakiilka anti-caking si loo yareeyo qiimaha wax soo saarka.
Muuqaalka Muuqaalka Kululaynta Hawo-kulul
Xulashada Qaabka Kulkulleeyaha-kulul
Sahayda kuleylka ee la qiimeeyay
Waxtarka kuleylka （%）
Isticmaalka Dhuxusha (kg / h)
Isticmaalka Awooda （kw / h）
Mugga sahayda hawada (m3 / h)
Hore: Mashiinka Daaweynta Bacriminta Rotary
Xiga: Heerkulka Sare ee Warshadaha oo Qabsaday Fan Fan
Hordhac Waa maxay Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha? Nooca Cusub Granulator Bacriminta Dabiiciga ah ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa isku ururinta bacriminta dabiiciga ah. Nooc cusub oo ka mid ah granizer bacriminta dabiiciga ah, oo sidoo kale loo yaqaan mashiinka qulqulka qulqulka qoyan iyo mashiinka kala soocida kacdoonka gudaha, waa granulat bacriminta cusub ee ugu dambeysa ...
Nooca Crawler Noocyada Wasakhda Beeraha ee Wasakhda Ma ...
Hordhaca Crawler Nooca Isku-darka Wasakhda Isugeynta Isugeynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Qashinka Wasakhda ah ee Isukeenista Mashiinka Mashiinka ayaa iska leh habka khamiirinta dhulka, taas oo ah habka ugu dhaqaalaha badan ee lagu keydiyo carrada iyo ilaha aadanaha. Maaddadu waxay u baahan tahay in la isku tuuro, ka dibna walaxda ayaa la walaaqaa oo ...